उम्मेद्वार - डा .गोविन्द राज पोखरेल
डा .गोविन्द राज पोखरेल नेपाली कांग्रेस प्युठान १
डा. गोविन्दराज पोख्रेलको जन्म २०२३ माघ ७ गते प्यूठान जिल्लाको रस्पुरकोटमा भएको हो । गोविन्दराज पोखरेलको विगत राजनीति भन्दा पनि व्यावसायिक र पेशागत रुपमा बलियो देखिन्छ । डाक्टर पोखरेलले उर्जा र आर्थिक नीतिमा जर्मनीको फ्लेन्सवर्ग विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधी गर्नुभएको छ । यस्तै विज्ञान विषयमा पनि जर्मनीबाटै स्नातकोत्तर र भारतको राजस्थानबाट इन्जिनियरिङमा स्नातक पास गर्नुभएको छ । डा. पोखरेलले २०७१ सालदेखि राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यमा रहेर काम गर्नुभयो । यस्तै २०७३ सालको पुसदेखि २०७४ सालको असोजसम्म राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) भएर काम गर्नुभयो । यस्तै २ कार्यकालसम्म वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको प्रमुखका रुपमा पनि पोखरेलले काम गर्नुभएको छ । यस्तै विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकमा पनि जागिरे भएर काम गर्नुभएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका विभिन्न क्याम्पसमा इन्जिनियरिङ विषयमा पनि डाक्टर पोखरेलले अध्यापन गर्नुभएको छ । नेपाली कांग्रेसप्रति धेरै पहिलेदेखि झुकाव रहे पनि डाक्टर पोखरेल सक्रिय राजनीतिमा लागेको धेरै समय भएको छैन । नेपाली कांग्रेसको १२ औं महाधिवेशनमा प्रतिनिधि र १३ औं महाधिवेशनमा महासमिति सदस्यमा पोखरेल चयन हुनुभएको थियो । २०७३ सालको महाधिवेशनमा कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्यको लागि उम्मेदवार बन्नुभएको थियो । तर उहाँ पराजित हुनुभएको थियो । उहाँ थापाथली क्याम्पसमा प्राध्यापक संघको अध्यक्ष र नेपाल इन्जिनियरिङ संघको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्थ्यो ।